I-Golfer Se Ri Pak: I-Biography kunye neNkcukacha zoLuntu
U-Se Ri Pak wayengumkhuhlane weKorea wokuqala ukwenza impembelelo kwiLPGA Tour. Kwaye kwenzeka ntoni - kwiminyaka eyi-10 yokujoyina i-LPGA, i-Pak yayifanelekile kwiHolo loLwazi.
Umhla wokuzalwa: Septemba 28, 1977
Indawo yokuzalwa: Daejeon, South Korea
Ukunyuswa kweLPGA Tour:
• I-LPGA Championship: 1998, 2002, 2006
• I-US Women's Open Open: 1998
• I-British Open Women: 2001
• Vare Trophy (i-average score score), 2003
• Ummkeli, uMyalelo weMerit waseMzantsi Korea, ngo-1998
• U-Ri Ri waqeqeshelwa kwiHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeGrama ngo-2005, kodwa kwafuneka alinde de kube ngu-2007 ukutyalwa ngenxa yobuncinane bokulawula ubude bokusebenza. Xa ekhutshwe, waba ngumdlali omncinane (oneminyaka engama-30) ophilayo ohloniphekileyo.
• Ngo-1998, eneminyaka engama-20, waba ngumncinci omncinci we- US Women's Open . I-Pak iphumelele imingxuma engama-20 kuloo ntoyisa, eyenza loo mqhudelwano - kwiimingxuma eziyi-92 ubude - umqhubi omde kunabo bonke bebadlali begalufa.
• I-Pak kunye noJuli Inkster kuphela abadlali abaphumeleleyo ukuphumelela amabini amajelo anamhlanje kumaxesha abo e-rookie kwi-LPGA.
• Ingxelo yakhe engama-6-0 kwi-playoffs yiyona nto ibhetele kwimbali yeLPGA Tour (ininzi iphumelela ngaphandle kokulahleka).
• I-Pak iphumelele i- Jamie Farr Kroger Classic ngo-1999 ngendlela engama-6, i-playoff enkulu kwi-Tour.
• I-Pak iphumelele amaFarr amahlanu (1998, 1999, 2001, 2003, 2007). Idibanisa irekhodi ye-LPGA - eyabelwe nguMickey Wright no- Annika Sorenstam - ngenxa yeyona nto inqobayo kwisiganeko esisodwa se-LPGA.
Se Ri Pak Biography:
Xa uSi Pak waqhuma kwindawo yesehlakalo ngonyaka we-1998 kunye nenye yezona zonyaka ezihamba phambili kwiLPGA Tour, wavula umnyango wegolferensi ezininzi zaseKorea ezamlandela eMelika. Ngaloo ndlela wavula enye yeyona ndlela ibaluleke kakhulu kwigalufa yabasetyhini ekupheleni kwekhulu lama-21.
I-Pak ayizange iqale ukudlala igalofu njengomntwana eSouth Korea kude kube neminyaka eyi-14. Wayeyinkwenkwezi yenkwenkwezi esikolweni esiphakeme, ezanceda ukukhula kwamathanga anamandla nemilenze ayenzisayo ekuhambeni kwakhe kwegalufu ukudala ukuzinza nokuzinza.
Ngaphandle kokuqala kokuqala, iPak yakwazi ukuphumelela i-tournaments ezingama-30 eMzantsi Korea. Waguquka ngo-1996. Kwiminyaka emibini ezayo, wayedlala imicimbi e-14 kwi-Korean LPGA, ephumelela ezintandathu kunye nokugqiba kwesixhenxe kwabanye abasixhenxe.
I-Pak ibophelelwe kuqala kwi- LPGA Q-School ngo-1997 kwaye yajoyina uhambo ngo-1998. Kwaye akuzange kumthathe ixesha elide ukuba enze uphawu: Ukuphumelela kwakhe kokuqala kwakuyinkunzi, i- LPGA Championship , eyayinqoba i-wire-to-wire .
Kwaye ke ukuphumelela kwakhe okwesibini kwakukho enkulu, i-US Women's Open, eyayinqoba kwindawo ephawulekayo engama-20 engumngceli uJenny Chuasiriporn. Pak wabuyisela kwakhona ngeveki ezayo kwiJamie Farr Kroger Classic, wabuyisa kwakhona emva kweeveki ezimbini.
Iimpumelelo zayo ezine njenge-rookie ziboshwe nge-Pak kunye no-Annika Sorenstam ukukhokela iTyelelo. Ngethuba uPak wagijima kunye noRokie woNyaka uzukisa, uSorenstam wancama umvuzo we-Player based Year.
I-Pak yayinamandla kwaye iphumelele kwimpumelelo kwiminyaka emininzi ezayo, ezinezinkozo ezine ngo-1999, kwaye zintlanu nganye ngo-2001 no-2002.
Kwakhona waphumelela amaninzi, nangona wayengenakudlulela uSorenstam ngesihloko semali okanye uMdlali wonyaka ozukileyo. Ukususela ngo-1998 ukuya ku-2003, i-Pak yayisemgijimini kwirejista yemali yesine kunye neyesithathu kanye kwakhona.
Ngo-2003, i-Pak inomncintiswano kwisiganeko sotyelelo lwamadoda aseKorea kwaye yagqiba ishumi. Uphumelele kathathu kwi-LPGA ngaloo nyaka, nge-20 kwi-26 ye-Top 10s. Ukuphumelela kwakhe ngowama-2004 kuye kwaba ngumqeqeshi wakhe, eneminyaka engama-27, kwiHolo loMdumo, kodwa kwakufuneka alinde ukunyulwa kuze kube ngumnyaka we-10 kwiLPGA Tour (2007).
Ukutshatyalaliswa okulandelelweyo, kubangele kokutshatyalaliswa kunye nokulimala ngokukhawuleza. Kodwa i-Pak yabuya ukuphumelela enye inkulu, i-LPGA Championship, ngowama-2006, ukulwa noKarrie Webb ngokukhawuleza.
Ngokumomotheka kwakhe okulula kunye nokuhleka ngokukhawuleza, uPak waba ngumdlali othandwayo kunye nabadlali bakhe. Emva kokubona impumelelo yakhe, umkhukula kwezinye iiglasi zaseKorea zaqala ukudlala i-LPGA, abaninzi banempumelelo enkulu-nangona akukho mpu melelo efana nePak.
Kwi-2007 LPGA Championship, Pak ngokusemthethweni yaba yiHolo yeNzara ngenkathi ubuncinane beemfuno zomsebenzi wexesha elide lizalisekile. Kodwa ngokubhekiselele ekusebenziseni ukulimala, iPak yaphumelela kuphela emva koko kwaye yashiya umhlala kwiLPGA Tour ngo-2016.
I-Acyl Group Inkcazo kunye nemizekelo
I-Major League Baseball Yonke Inqabileyo Yemidlalo Yasekhaya Yenza i-Derby Champions
Iingcebiso ezili-10 zokusebenzisa izifinyezo ngokuchanekileyo
Qeqesha njenge-Olympic Figure Skater
INgxelo ye-Worst Rap Worst of All Time
Inkcazelo yeeRepartee kunye nemizekelo
Yintoni i-Judicial Rhetoric?
Izigaba ezintathu zeGeyile zokuGqugquzela ukuBambisana
Imfazwe yeNgesi-Zulu: iMfazwe yase-Isandlwana